Semalt - Njani Ukuphelisa Umngcipheko Wokuhlaselwa Kwe-Malware?
Akunakwenzeka ukuba sihlale siphephile kwi-intanethi. Nesistim ephezulu ye-antivirus software kunye neeprogram azikwazi ukuphelisa ubungozi obubangelwa zihlaselo kunye nokungena. Ngaloo ndlela, amathuba okusuleleka yi-virus ahlala ephakamileyo. Nangona kunjalo, sinokuzikhusela kwi-intanethi ngokulungisa amanyathelo ambalwa kunye nokunyamekela izicwangciso zethu zokhuseleko.
Kunokwenzeka ukunciphisa ubungozi bokuhlaselwa kwe-malware kunye nezicwangciso ezichazwe nguRyan Johnson, uMphathi oyiNtengiso we-10 (Semalt Iinkonzo zeDivarti:
1. Umele uqhagamshelane nomboneleli wakho we-ESET xa umonakalo ulihlasele okanye inkqubo yakho ayisebenzi kakuhle.
2. Kufuneka uzikhusele ngeenguqulelo zakutsha ze-ESET.
3. Kufuneka uhlale ujonga ukhuphiswano olukhuselekileyo kwaye ufake i-antivirus yangoku kunye ne-anti-malware software.
4. Gcina iikhompyuthali ezikhuselekile ngokuba neephasiwedi ezinamandla kunye namagama abasebenzisi.
5. Zifundise wena nabantwana bakho malunga nendlela yokuhlala ukhuselwe kwi-intanethi.
Zikhusele iimveliso ze-ESET
Kubaluleke kakhulu ukugcina i-database yakho ihlaziywa. Iingcali kwi-laet ze-ESET zinebhubhsayithi zithi ininzi yezisongelo ze-intanethi zibangelwa kuba abantu abazange baqwalasele ukuhlaziya i-software kunye nezixhobo zokusebenza. Ngoko kubalulekile ukugcina idatha yakho ikhuselekile ngeenguqulelo ze-ESET zangoku. Iinguqu zayo ezihlaziyiweyo zifumanisa ngokukhawuleza iintsongelo kwaye ziyakwazi ukugcina iikhompyutheni zakho zikhuselekile ngekhefu.Ufanele ube nemveliso ekhuselekileyo ye-ESET. inkampani kwaye ubuze ukuba bangayifumana njani iinguqulelo zakutshanje. Akukho mfuneko yokuzama iinguqulelo ezidlulileyo ezingenanto. Ukubaluleka kweemveliso ze-ESET kubalulekile ukuze uqinisekiswe ukhuseleko olupheleleyo kunye nokhuseleko. Zama ukukhusela i-ESET Smart Security ineenombolo ezinkulu zezikhuni ezikhethwa kuzo. Kufuneka ugcine iinkqubo zakho zokukhusela iifayile xa usebenzisa i-intanethi njengoko izakukhuphula ukhuseleko lwakho lwe-intanethi nokukhuseleko. Ekugqibeleni kodwa kungengona mncinci kufuneka wenze iikhompyutheni rhoqo. Njalo ekuseni xa uhleli phambi kwekhompyutheni yakho, kukuhle ukuqhuba ithuluzi lokukhusela i-antivirus kwaye vumela ukuba ihlole inkqubo yakho yonke.
Ziqhelise ukuphequlula i-Internet ephephile
Kufuneka uhlale ujonga ukukhuqulwa kwe-intanethi ngokukhuselekileyo. Kule nto, kufuneka ukhawuleze ukufikelela kumanqaku angabonakaliyo kunye namanqabileyo ewebhu. Kubalulekile ukuguqula i-ad-blocker yakho ngelixa usebenzisa iiprofayili zakho zentandokazi yoluntu okanye ushishino lwe-intanethi. Ngexesha elifanayo, kufuneka ukhethe amaphasiwedi anamandla kunye nexesha elide kunye necala eliphantsi. Awufanele uphinde wabelane ngephasiwedi yakho nabani na, nayiphi na indleko. Hlala kude nama-imeyile avela kwii-ID ezintsha kunye nabantu abangaziwa. Akufanele unqakraze kwiikhonkco kunye nokunamathiselwe kwe-imeyli yogaxekile njengoko ezi zinto zingabakhomaza kwiikhompyutha zakho.
Gcina ikhompyutha yakho ikhuselekile
Kufuneka ugcine iikhompyutha zakho zikhuselekile. Ngenxa yoko, kufuneka ulondoloze iifayile zakho kunye nedatha ebalulekileyo rhoqo. Qinisekisa ukuba uphinda le nkqubo kathathu ngeveki njengoko ungafuni ukulahlekelwa iifayile kunye neefolda zakho. Xa usebenzisa izixhobo zangaphandle ezifana ne-USB kunye neDVD, kufuneka uguqule isofthiwe yakho ye-antivirus ukukhusela ii-virus kunye ne-malware. Akufanele utshintshe izicwangciso ezizenzekelayo zefowuni uze ufumane ezinye izinto ezinokungaqiniseki Source .